Akakwidziridzwa-motokari bhurudhoza SD7N - China Xuanhua Construction Machinery
SD7N bhurudhoza iri 230 horsepower njanji-mhando dozer pamwe yakakwirira sprocket, simba kusuduruka nemotokari, Semi-vanachandagwinyira yakaturikwa uye hydraulic chidhiraivho. SD7-230 horsepower, yakakwirira sprocket bhurudhoza nokusangana pamwe modular Magadzirirwo nyore yokugadzirisa & Nokuraramisa, It Unotsigira mafuta musiyano nevezera, ari hydraulic maitiro anoita kuchengetedza zvakatipoteredza uye nokuponesa simba dzakakwirira raingova kunyatsoshanda. Safety dzakafanira mashandiro ezvinhu, yemagetsi zvichiongororwa uye ROPS kabhini pamwe yakavimbika yose unhu ...
SD7N bhurudhoza iri 230 horsepower njanji-mhando dozer pamwe yakakwirira sprocket, simba kusuduruka nemotokari, Semi-vanachandagwinyira yakaturikwa uye hydraulic chidhiraivho.
SD7-230 horsepower, yakakwirira sprocket bhurudhoza nokusangana pamwe modular Magadzirirwo nyore yokugadzirisa & Nokuraramisa, It Unotsigira mafuta musiyano nevezera, ari hydraulic maitiro anoita kuchengetedza zvakatipoteredza uye nokuponesa simba dzakakwirira raingova kunyatsoshanda. Safety dzakafanira mashandiro ezvinhu, yemagetsi zvichiongororwa uye ROPS kabhini pamwe yakavimbika yose quality, rakaisvonaka basa kuchenjera kwenyu wasarudza.
Inogona vakapakata kururamiswa tilting chipande, angled chipande, marasha kufurira chipande, U chimiro chisvo; kuroorwa shank Ripper, matatu nemazondo Ripper; ROPS, FOPS, dondo kudzivirira kabhini nezvimwewo .. Hazvina zvinogona akakodzera muchina kushandiswa pakukurukurirana, munda mafuta, simba, migodhi etc. guru pasi chinofamba chirongwa.
(kwete kusanganisira Ripper) Operation uremu ( KG) 23800
Ground kumanikidzwa (K Pa ) 71.9
Track geji (mm) 1980
Min. pasi Clearance (mm) 404
Dozing chinzvimbo ( mamita ³) 8.4
Chipande upamhi (mm) 3500
Max. kuchera udzamu (mm) 498
Uchitikurudzira miganhu ( mm ) 5677× 3500× 3 402
(kusanganisira Ripper) 7616 × 3500× 3 402
Previous: Multi-basa bhurudhoza SD7LGP
Next: Akakwidziridzwa-motokari bhurudhoza SD8N
320hp Crawler bhurudhoza
320hp High Track bhurudhoza
80hp Small Track bhurudhoza
Brand New Engine bhurudhoza Sd16
bhurudhoza Track Sprocket
Cat D5h Crawler bhurudhoza
nomupedzachose bhurudhoza D9r
nomupedzachose D6 bhurudhoza
Factory Direct Sale Track bhurudhoza
Hbxg High Track bhurudhoza Sd08
Hbxg Track bhurudhoza 320hp
Komatsu bhurudhoza D85
Komatsu D85 bhurudhoza
Metal toy bhurudhoza
New Track Bhurudhoza
dzakagadzirisa bhurudhoza Sd16
Shantui bhurudhoza 320hp
Shantui bhurudhoza For Sale
Shantui Sd32 bhurudhoza
Small Crawler bhurudhoza
Used bhurudhoza Cat D9r
Used bhurudhoza D5k
Used bhurudhoza Tracks
Used Cat bhurudhoza D6m
Used Cat bhurudhoza D7
Used Cat bhurudhoza D9
Used Cat D5h bhurudhoza
Used Cat D5n bhurudhoza
Used Cat D6g bhurudhoza
Used nomupedzachose D6g bhurudhoza
Used D65p bhurudhoza
Assaster bhurudhoza SD7
Coaling bhurudhoza SD7